सपनाको एउटा सफर- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
माछाको दुनियाँबाट संसारलाई चियाउने एउटा आँखीझ्याल हो नाटक ‘जिजीविषा’, आफूले पाएको भेउ अर्को पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको यात्रा पनि हो
कार्तिक ८, २०७८ दीपक सापकोटा
काठमाडौँ — माछाहरूले आफ्नो कथा भन्नुपरे कसरी भन्लान् ? माछाका दृष्टिबाट मनुष्यका कर्तुत देखाउन मण्डला थिएटरमा मञ्चित नाटक ‘जिजीविषा’ ले भन्छ– मान्छेको मगजमा माछाको अनुभूति निसास्सिँदो छ ।
बाढी–पहिरोको गर्जन ! मानिसहरूको चीत्कार ! पशुपक्षीको पुकार ! खोलाको बगरमा मानिस, पशुपक्षी र माछाका लास छरिएका छन् यत्रतत्र । प्राकृतिक प्रकोपको अत्यासलाग्दो आवाजले मञ्च गुञ्जायमान् छ । पुन्टियस माछा घाइते छ । लासहरूबीच ऊ आफन्त खोज्छ । सेती असला रगतपच्छे छिन् र आफ्नो अन्तिम सास लिइरहेकी छन् । ‘जिजीविषा’ नाटकको अन्तिम दृश्य हो यो । नाटकमा माछाहरू पात्र छन् ।
नाटक ‘जिजीविषा’ एउटा सपनाको सफर हो । एक दृश्यमा अक्वारियममा पुन्टियस पौडिरहेको छ । उसलाई त्यस अक्वारियमभन्दा बाहिर बगिरहेको खोलाको ताजा पानीमा पौडिन मन छ । ऊ पौडीका विभिन्न तौरतरिका अपनाउँछ, मज्जाले उफ्रिन्छ, तर सानो अक्वारियमबाट बाहिर जान सक्दैन । अक्वारियम बाहिरबाट उसलाई हेरिरहेकी एउटी बालिका खुसीले हाँस्छे । पुन्टियस भन्छ– ‘अरूलाई सास्ती हुँदा हाँस्दा रैछन् मान्छेहरू ।’ ‘जिजीविषा’ फराकिलो संसार चाहनेहरूको कथा हो । पुन्टियस माछा र उसका साथीहरूको एउटा लामो यात्रा–कथा हो । शनिबार साँझ पहिलोपटक मञ्चन भएको यो नाटक माछाहरूको दुनियाँबाट संसारलाई चियाउने एउटा आँखीझ्याल हो ।
एक दृश्यमा रजबाम माछा भन्छ, ‘जतिजति मान्छेको बस्ती आउँदै जान्छ, माछाको वरिपरि काल घुम्छ । हामीले तैरिएपिच्छे होस राख्नुपर्छ । कतै बल्छी, कतै बम र कतै जाल हाम्रो काल पर्खेर बसेका हुन्छन् ।’ मान्छेहरूको संसार कति भयंकर छ र उसले आफ्नै प्रजातिलाई कसरी सिध्याइरहेको छ– ‘जिजीविषा’ ले नाटकमार्फत भन्न खोजेको छ ।
हिमालको फेदमा पानी सुक्दै गरेको एउटा तलाउ छ । तलाउभित्र भ्यागुताहरू ट्वार्रट्वार्र कराएको आवाज सुनिन्छ । पात्रहरू छन्– टिकुली, बुच्चे असला, बुदुना, चुच्चे असला, जलकपुर, तिल्के असला, धामी असला, रजबाम, भ्यागुताहरू, साइबेरियन चराहरू । बिस्तारै उनीहरूको आवाजले एउटा गति समात्छ । र, त्यो गति गीत बन्छ ।
नाटकमा मान्छेहरूले माछाको रूप धरेका छन् । रंगीविरंगी अनेक माछाहरू पौडिरहेका छन् मञ्चमा । पानीभित्रको विश्व देखाउँछ, मञ्चमा प्रयोग गरिएको मल्टिमिडिया र प्रोजेक्टरको उज्यालोले । तलाउको डिलमा लहरै भ्यागुताहरू देखिन्छन् । अलि परै माछा खान पर्खिएर बसेका साइबेरियन चराहरू चनाखो भएर तलाउनजिक आउँछन् । गीत बज्छ–
अक्काशैमाथि बादल छ दूर/म गाउँछु चिर्बिर
भाग्यको रेखा चरीपञ्जैमा/लेखेको किर्मिर
उडेर आएँ घरदेशबाट जानु छ परदेश
सपना थियो सुन्दर तर भैसक्यो अब शेष
साइबेरियन चराहरू गीत गाएर आफूहरूलाई घर फर्किन ढिला भएको कथा सुनाउँछन् । भ्यागुताहरू गीत गाएर माछाहरूले भोग्नुपरेका समस्या भन्छन् । भ्यागुताहरू मधुरो भाकामा गीत गाइरहन्छन्–
उडी आयौ कहाँबाट/कहाँ जान्छौ चरी
तिमी गएपछि मेरो/मन रुन्छ चरी
हिमाली फेदको कुनै मुहानमा पानी सुक्दै गएपछि पोखरीका जलचरमा भयानक संकट उत्पन्न हुन्छ । र, उनीहरू समुद्रसम्मको यात्रा गर्छन् । उर्लंदो खोलाको प्रवाहमा माछाहरू अनौठो यात्रा गरिरहेका छन् । नाटकमा ऋतु परिवर्तन भएको छ, खोलामा बाढी आएको छ । केही माछा औधी रमाएका छन्, केही असाध्यै आत्तिएका छन् । रूखका पहेंला पातजस्ता पातला देखिने ती माछा सफा पानीमा सैसला खेलिरहेझैं लाग्छन् । जमेको पोखरीबाट बगेको पानीमा पुगेका ती रंगीविरंगी माछाहरू जीवनको प्रवाह देखेर विस्मित हुन्छन् । यहाँ किरगिजस्तानी लेखक चिनगिज आइतमातोभको एउटा लाइन सम्झना हुन्छ, ‘सबै जीवित वस्तुको आ–आफ्नै वसन्त र शरद् हुन्छ ।’
सामान्य रूपमा हेर्दा नाटक माछाहरूको कथा भए पनि यो मान्छेहरूको जीवनको कथाहरूसँग गाँसिन्छ । माछाहरूको तलाउमा पानी सुक्नु भनेको मान्छेहरूको तलाउको पानी सुक्नु हो । हाम्रो शक्ति गुम्नु हो । पर्यावरणका तत्त्व सुक्नु हो । पानी मान्छेको जीवनमा पनि नभई नहुने, माछाको जीवनमा पनि नभई नहुने ! पानीको महत्त्व पनि कहन्छ नाटकले । यात्रा गरिरहनुपर्छ, एकै ठाउँमा जमेर बस्नुहुँदैन भनेर पनि भनिरहन्छ नाटकले । नाटकको मध्यतिर एउटा प्रेरणादायी गीत गुन्जिन्छ–
आशाका ती मसाल बोकी अघिअघि बढ्दै छन्
सपनाका यात्रीहरू, हेर समयलाई जित्दै छन् ।
जिन्दगीको रहस्य पत्ता लाग्नेवाला छैन, तर त्यसको रहस्य बुझ्ने यात्रा रोक्नु हुँदैन भन्छ नाटकले । आफूले पाएको भेउ अर्को पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको यात्रा पनि हो नाटक– जिजीविषा । तर, यात्रामा हिँडेका माछाहरूले भने अनेक संकटको सामना गर्छन् । संकट तलाउमा बस्नेहरूलाई मात्र होइन, यात्रा गर्नेहरूलाई पनि छ भन्छ माछाहरूको यात्राले । मान्छे गाउँमा संकट भोगेर सहर पस्छ, तर सहरमा झनै संकटहरू थपिएका छन् । यात्रा गरिरहेका माछाहरूलाई मानिसहरूले जाल हान्छन् । यसले भन्छ, बजारले मान्छेलाई जाल हानिरहेको छ । अक्वारियममा माछाहरू छन् । मान्छेहरू पनि अक्वारियममा बन्द छन्, देश र पासपोर्टका नाममा हामी अक्वारियममा बन्द छौं भन्ने कथा नाटकले भन्छ । नाटकमा संकट छ, संकटलाई पार लगाउने शक्ति छ, अनि नाटकको यात्रामा खराब माछा छन्, असल पनि भेटिन्छन् ।
एउटा दृश्यमा ह्याट लगाएको सुकिलो मान्छेले सुटकेसमा ल्याएर बियरको क्यान र प्लास्टिकका खोलहरू खोलामा फालिदिन्छ । बियरको क्यानलाई टोपी बनाउँछ एक माछाले । यस दृश्यले मान्छेलाई कसरी मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले दास बनाइरहेका छन् भन्ने संकेत दिन्छ । मान्छेमा भएको विचलनको यात्रा पनि हो यो कथा । यात्राको बीचमा लुटेरा माछा मिसिन्छ, अन्य माछाहरूलाई लुट्छ । सुनौला माछाहरूले यात्रा गरिरहेका माछाहरूलाई बन्धक बनाउँछन्, कुनै बेला माछाहरू भुमरीमा पर्छन् । बगेका अण्डाहरू भुमरीभित्र होलान् भनेर खोज्छन् । ठूलो महासेर माछा भेटिन्छ, जसले सबै साना माछाहरू खान मुख बाउँछ । तर, यात्रारत माछाहरू एकजुट भएर ऊसँग संघर्ष गर्छन्– अनेक सास्ती भोग्दै समुद्र पुग्छन् । तर, सागरमा पनि माछाहरूले शान्ति भेट्दैनन् । त्यहाँ पनि संकट देख्छन्, विचलन देख्छन्, महासागर पनि अशान्त देख्छन् । तैपनि कोही समुद्रमै बस्छन् । र, कोही आफ्नै पुरानो तलाउ फर्किन्छन् । साझा उद्देश्य बोकेर गरिएको यो यात्राले मानिसकै अनेक यात्रा र संघर्षको कथा भनिरहेको हुन्छ ।
२०७७ असोजदेखि सुरु गरिएको ‘सामाजिक रूपान्तरणका लागि रंगमञ्च’ कार्यक्रमअन्तर्गत मण्डला ड्रामा स्कुलको पहिलो शैक्षिक सत्रको अन्तिम नाट्य प्रस्तुति हो यो नाटक । कलाकारहरू आकाश नेपाली, आदित्य मिश्र, अनिल कुर्मी, सुस्मिता पोख्रेल, सुस्मिता गुरागाईं, विष्णुमाया परियार, शिव परियार, सञ्जय विश्वकर्मा, समृद्धि नेपाल, सरिता कठायत, पासाङ ल्हामु शेर्पा, सुमित्रा पेहिम, हाङ ओ हाङ राई, दीक्षा चौधरी, प्रदीप ढुंगाना, नीरज चौधरीको अभिनय जीवन्त छ । सोमनाथ खनालको लेखन र राजन खतिवडाको निर्देशन रहेको नाटकमा संवाद र गीत लेखेका छन्– कवि/आख्यानकार विप्लव प्रतीकले । संगीत उत्सव बुढाथोकीको छ ।
‘जिजीविषा’ बोकेका माछाहरूले गरेको समुद्रको यात्रा नै नाटक जिजीविषा हो, जहाँ कोही नायक छैनन्, न छन् सहायक पात्र । नाटकको अन्त्यमा सेती असला माछाले प्राण त्याग गर्छिन् । धमिलो हुँदै गएको मञ्चको सेतो, नीलो र खैरो प्रकाशमा उदास पुन्टियस चिच्याएर रुन्छ । तर, निर्जन किनारमा उसको विलाप बिलाएर जान्छ । रुँदारुँदै थाकेपछि पुन्टियस खोलाको किनारमा आइपुग्छ, एकाग्र दृष्टिले खोला अनि आफू आएको बाटोतिर हेरिरहन्छ । र, जारी राख्छ आफ्नो यात्रालाई । अन्तिम गीत बज्छ–
एउटा यात्रा हो जिन्दगी
यहाँ बस्नुको के काम
एउटा खोज हो जिन्दगी
यहाँ अड्नुको के काम ?
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०७:२१
आश्विन १६, २०७८ दीपक सापकोटा
समाजशास्त्री सुजित मैनालीको हालै प्रकाशित किताब ‘सती : इतिहास र मीमांसा’ ले सतीप्रथाको इतिहासदेखि महिला हिंसाको वर्तमान स्वरूपसम्मका विभिन्न आयाम केलाएको छ । उनी भन्छन्, ‘सतीप्रथा त हट्यो, तर यसका अवशेष महिला–हिंसाका विभिन्न स्वरूपमा जिउँदै छन् ।’ मैनालीसँग दीपक सापकोटाले गरेको संवाद :
तपाईंको किताबमा समेटिएको जंगबहादुरको समयको ‘एक अंग्रेज अधिकारीले पशुपतिमा देखेको सतीगमनको वर्णन’ पाठकलाई उद्विग्न पार्ने खालको छ । इतिहासले बिर्सिसकेका यस्ता घटना उधिनेर किताब लेख्नुको तपाईंको अभीष्ट के हो ?
सन् १९८७ मा भारतको राजस्थानमा रूप कँवर नामकी युवतीको सतीगमनपछि सतीप्रथा कुनै बेलाको चलन होइन, अहिलेकै समस्या रहेछ भनी थुप्रैले लेखे । सन् १९८७ यता पनि विधवालाई सती पठाइएका एकाध घटना भारतमा रहे । सन् २००८ मा छत्तीसगढमा सतीप्रथाको अभ्यास फेरि गरियो । यो सत्य हो कि नेपालमा सतीप्रथा बाँकी छैन । तर, त्यससँग जोडिएको मनोविज्ञान यहाँ पनि जब्बर छ । महिलाहिंसाको अन्तर्य खोतली त्यसलाई हटाउने कार्यमा थोरै भए पनि टेवा पुर्‍याउनु मेरो अभीष्ट हो । नारी–स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित गर्ने दिशामा ‘सती’ ले तिलबराबर मात्रै योगदान गर्न सके पनि म आफ्नो प्रयासलाई सार्थक ठान्नेछु भनी किताबमै उल्लेख गरेको छु ।
चाँगुमा मानदेवले लेखाएको स्तम्भलेख सतीप्रथाबारे उल्लिखित संसारकै पुरानो दस्तावेज हो । यस्तो प्रथा नेपालमा चन्द्रशमशेरको पालासम्मै जारी रह्यो । सतीप्रथाबारे बुझ्न कुन कालखण्डको अध्ययन बढी महत्त्वपूर्ण छ ?
सतीप्रथाको उद्भवबारे बताउने सामग्री इतिहासमा उपलब्ध छैनन् । यसका लागि हामीले प्राग्–इतिहासतिर नियाल्नुपर्छ । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको स्तम्भलेखसम्म आइपुग्दा सतीप्रथा नेपालमा संस्थागत भइसकेको देखिन्छ । गयासुद्दिन तुगलकले सिम्रौनगढमा हमला गरेपछि त्यहाँबाट पलायन भएका तिरहुतियाहरू आश्रय लिन भनेर काठमाडौं उपत्यका आए । मल्लराजा र यहाँका भारदारहरूसँग उनीहरूको अन्तरक्रिया सघन बन्दै गयो । त्यतिबेला गंगाको मैदानका विशेषतः राज तथा कुलीन परिवारमा सतीप्रथाको अभ्यास बढी हुन्थ्यो । तिरहुतियाहरूसँगको संगतले मल्लराज्यमा हिन्दु कट्टरता अभिवृद्धि हुँदै जाँदा सतीप्रथाको अभ्यास पनि कठोर हुँदै गयो । सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिसहरूसँग नेपाली शासकहरूको संगत बाक्लिन थालेपछि सतीप्रथालाई अंकुश लगाउने क्रमले भारतमा जस्तै नेपालमा पनि प्रश्रय पायो । चन्द्रशमशेरको पालामा आएर उन्मूलन नै भयो । सतीप्रथाका सन्दर्भमा यी सबै कालखण्डको आफ्नै महत्त्व छ । सतीप्रथासँग जोडिएको मनोविज्ञान र अर्थराजनीतिलाई समग्रमा बुझ्न यी सबै कालखण्डको सिंहावलोकन नगरी हुँदैन ।
सतीप्रथाको इतिहासले अहिलेको समाज अध्ययनमा कति महत्त्व राख्छ ?
इतिहासको टेको पाएन भने समाज अध्ययन जगबिनाको भवनजस्तो हुन पुग्छ । गडेर हेर्ने हो भने वर्तमानले इतिहासकै फन्को लगाइरहेको हुन्छ । सतीप्रथाकै कुरा गरौं । यो प्रथालाई राम्रोसँग पर्गेल्न सके महिलाले आजसम्म भोग्नुपरेका हिंसाको अन्तर्य बुझ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ । आफू जीवित छउन्जेल मात्र होइन, मृत्युपछि पनि पत्नीहरूले परपुरुष भोग्न नपाऊन् भन्ने मनोविज्ञान नै सतीत्व र सतीप्रथाको अवधारणा जन्माउने षड्यन्त्र हो । पत्नीबाट जन्मिएको बच्चा आफ्नै रहेको सुनिश्चित गर्न पत्नीहरूलाई परपुरुषबाट अलग्गै राख्ने उपक्रमको रचना गर्न पुरुषहरूले आवश्यक ठाने । पत्नीको कोखबाट सिर्फ आफ्ना सन्तान जन्मिऊन् र उनीहरूका नाममा आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सकियोस् भन्ने अभिलाषाबाट त्यो सब काम भयो । सतीप्रथा नारीहन्ता कैंची हो भने वंश र अंशका सवाल त्यसका दुई धार हुन् । महिलाको यौनजीवन नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष वा संरचनागत हिंसा प्रयोग गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । नारीद्वेषी पुरुषहरूले ‘आफूले भोग्न नपाएकी स्त्री अरूले पनि भोग्न योग्य नरहून्’ भनेर तेजाब छ्यापिरहेकै छन् । परिवार अथवा समाजसामु हरेक महिना नछुने भएको घोषणा गर्न लगाएर महिलालाई ‘म यो महिना पनि गर्भवती भएकी छैन’ भन्न बाध्य पार्ने काम भइरहेकै छ । महिलालाई घुम्टो वा बुर्काले छोपिन विवश पारेर परपुरुषलाई हेर्नसम्म नदिने क्रम रोकिएको छैन । यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् ।
सतीप्रथा व्यापक भएको त्यो कट्टर कालखण्डलाई समाज–चेतनाका हिसाबले (कुनै पात्र वा घटनाविशेषलाई मात्र नहेरी) समग्रमा कसरी मूल्यांकन गर्नुपर्छ ?
सतीप्रथा अथवा यससँग मिल्दोजुल्दो अभ्यास अरू देशमा पनि थियो । महिलाको परपुरुषगमनलाई नियन्त्रण गर्ने आममनोविज्ञान र कानुन संस्थागत गरिसकेपछि पतिको मृत्युपछि पत्नीहरूलाई मार्ने चलन अब आवश्यक छैन भन्ने तात्कालिक पुरुषप्रधान समाजले महसुस गर्‍यो । त्यस्तो प्रथा क्रमशः हराउँदै गयो । ठीक त्यति नै बेला भारतीय उपमहाद्वीपमा बाह्य हमलाको शृंखला सुरु भयो । ग्रीकदेखि मुसलमान र इसाईसम्मले भारतमाथि धावा बोले । यहाँका हिन्दुमाथि शासन गरे । आक्रामकहरूबाट जोखिम महसुस गर्ने समुदायले कथित स्वत्व जोगाउन आफ्नो समुदायका महिलाको यौनजीवन नियन्त्रण गर्ने गर्छ । पुरुषप्रधान समाजले महिलाको मूल्य उनीहरूको योनि र कोखमा मात्रै देख्छ । आफ्नो समुदायका महिलाको कोखबाट आक्रामकहरूले लाभ लिन नपाऊन् भनेर त्यस्तो समाजले पातिव्रत्य धर्मको महिमा गाउँछ । उनीहरूलाई घर वा परिधानभित्रै कैद हुन बाध्य पार्छ । अन्तरजातीय विवाहलाई निरुत्साह गर्छ । वर्ण–व्यवस्थाअन्तर्गत प्रतिलोमसम्बन्धी व्यवस्थादेखि वर्णसंकरहरूप्रतिको वितृष्णासम्मका विषयलाई सतीप्रथाकै आलोकमा हेरियो भने धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
हिन्दु समुदायले बाह्य हमला बेहोर्न थालेपछि सतीप्रथा, वर्णव्यवस्था, नछुने बार्ने चलन, घुम्टो प्रथा आदि कट्टर बनेका हुन् । यही कारणले त्यति बेलाका अर्थात् उत्तरवैदिक कालका धर्मशास्त्रहरू महिलाप्रति बढ्तै अनुदार छन् । नारी–अधिकारका पक्षधरहरूले मुसलमान समुदायमा नारीमाथि गरिने हिंसाको विरोध पनि गरिरहेका छन् । मुसलमान समुदायमा नारीको स्थान कसरी ओरालो लाग्यो भनी खोतल्दै गयौं भने हामी यहुदी र इसाई समुदायबाट उनीहरूले महसुस गरेको असुरक्षासम्म पुग्छौं । शत्रुबाट जोखिम महसुस गर्ने समुदायले ‘आफ्ना’ महिलाको योनिमा अझ कसिलो अंकुश लगाइदिएर ‘ढुक्क’ महसुस गर्ने गरेको दृष्टान्त छ ।
सतीप्रथाबारेका अघिल्ला किताबभन्दा यसमा पाठकले के नयाँ खुराक पाउँछन् ?
यो पाठक र समीक्षकहरूले खुट्याउने विषय हो । एउटा कुराचाहिँ भनिहालौं– नेपाली सन्दर्भमा सतीप्रथा अथवा दासप्रथाबारे लेख्ने कसैले पनि मालिक मर्दा सती पठाइएका दासी अथवा कमारीहरूबारे समुचित ध्यान दिएका थिएनन् । किताबमा एउटा अध्याय छुट्याएर मैले जिउँदै पोलिएका कमारीहरूको चीत्कार समेट्ने प्रयास गरेको छु ।
इतिहासका एकाध अभिलेख र किंवदन्तीमा सीमित बनेको एउटा क्रूर प्रथाबारे लेख्न तपाईंले के–केलाई आधार बनाउनुभयो ?
अप्रकाशित–प्रकाशित दुवैखाले सामग्रीलाई आधार बनाएको छु । अन्तर्वार्ता र अवलोकनमार्फत सतीस्थलसँग जोडिएका किंवदन्ती र अनुश्रुति बटुली तिनको उपयोग गरेको छु । कतिपय ऐतिहासिक रुक्का, पत्र, लालमोहर आदि यसअघि प्रकाशमा आए पनि सतीप्रथा अथवा लैंगिक सवालबारे कलम चलाउनेहरूको नजर तिनमा पर्न सकेको थिएन । त्यस्ता सामग्री पनि उपयोग गरेको छु ।
सतीप्रथा भारतीय उपमहाद्वीपमा मात्र सीमित थियो ?
अन्यत्र पनि थियो । प्राचीन समयमा चीन, इजिप्टलगायत ठाउँमा मृतक पतिका नाममा उसका पत्नी, भोगिनी, दासी आदिलाई मारेर सँगै गाड्ने गरिन्थ्यो । सतीप्रथासँग मिल्जोजुल्दो चलन युरोप, ल्याटिन अमेरिका, साइबेरिया र अफ्रिकामा पनि थियो । विवाह, मृत्युसंस्कार, पुनर्जन्मको अवधारणा, ईश्वर र भूतप्रेतप्रतिको विश्वासजस्तै विधवा उन्मूलन–प्रथा पनि स्वतन्त्र रूपले संसारका विभिन्न ठाउँमा छुट्टाछुट्टै उद्भव भएको देखिन्छ ।
नेपालमा सतीप्रथा उन्मूलन गरिँदा राणाहरूको निरंकुश शासन थियो । परम्परावादी र तानाशाही शैलीमा राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरूले त्यति ‘प्रगतिशील’ काम किन गरे होलान् ?
सतीप्रथाको अभ्यास नेपालमा बाक्लो थिएन, न त यो बाध्यकारी थियो । महत्त्वपूर्ण मानिएका थुप्रै धर्मशास्त्रमा सतीप्रथाबारे उल्लेखै छैन । तन्त्रविद्याका कतिपय शास्त्रले सतीप्रथालाई सीधै नकारेका छन् । सतीप्रथाले धर्मको बलियो टेको नपाएकाले यसलाई उन्मूलन गर्नु त्यति चुनौतीपूर्ण थिएन । चन्द्रशमशेरको पालामा नेपालमा पश्चिमी प्रभाव अझ सघन भयो । त्यतिबेला पश्चिमी मुलुकतिर समाजसुधारका आवाज उठिरहेका थिए । दासप्रथाको विरोध भइरहेको थियो । त्यसअगावै ब्रिटिस भारतमा सतीप्रथा उन्मूलन भइसकेको थियो । त्यस्तो परिवेशले चन्द्रशमशेरलाई पनि सतीप्रथा उन्मूलन गर्न प्रेरित गर्‍यो । आवश्यक तयारी पूरा गरेर समाज सुधारका काम अत्यन्तै होसियारीपूर्वक गर्ने स्वभावका कारण पनि चन्द्रशमशेरलाई यसमा सफलता मिलेको थियो ।
सतीप्रथाबाट महिलाहरू मात्र पीडित थिए ? उनीहरू खास गरी कुन समुदाय र हैसियतका थिए ?
मालिक मर्दा दासलाई पनि सती पठाइन्थ्यो । नरभूपाल शाहको मृत्यु हुँदा एउटा कमारोलाई जिउँदै पोलिएको थियो । त्यसरी पोलिने व्यक्तिलाई सतु भनिन्थ्यो । सम्पन्न घरानाले बुहारीहरूको यौन स्वतन्त्रतालाई बढी निगरानीमा राख्ने गर्छन् । त्यसैले सतीप्रथा मूलतः राजघरानामा बढी अभ्यास हुन्थ्यो । मल्लकालमा छोराको मृत्यु हुँदा आमालाई पनि सती पठाइएको थियो ।
सतीप्रथाप्रतिको पुरुष मनोविज्ञानचाहिँ कस्तो छ ? यसको उन्मूलनलाई पुरुषहरूले कुन रूपमा लिएका छन् र लिनुपर्छ ?
सतीप्रथा उन्मूलन हुँदै गर्दा केही पुरुष त्यसको विपक्षमा थिए । अहिले पनि कतिपय पुरुष ‘महिलाहरू प्रेमविभोर भएर पतिसँगै जल्ने गर्थे, प्रेमी अथवा पतिको मृत्यु हुँदा अहिले पनि त विष खाएर आत्महत्या गर्नेहरू छन्’ भन्ने तर्क गर्छन् । यस्तो कथनले विधवालाई बाँधेर, ढुंगाले हानेर, अफिम ख्वाएर, लछारपछार गरेर जबरजस्ती चितामा होमिदिने चलनलाई सही ठहर्‍याइरहेको हुन्छ । यस्तो विश्लेषण गर्नेहरूले यस विषयको हेक्का राख्नुपर्छ ।
तपाईं आफ्ना लेख–रचनाहरूमा रामायण–महाभारतजस्ता पौराणिक ग्रन्थलाई पनि प्रमाणका आधार बनाइरहनुहुन्छ । यी ग्रन्थ स्वयंचाहिँ कत्तिको प्रामाणिक हुन् ?
ऋग्वेदको एउटा प्रसंगमा ‘वेश्यासँग पुरुषहरू संयुक्त भएजस्तै मरुद्गण विद्युत्सँग एकाकार हुन्छन्’ भनिएको छ । यस आधारमा त्यतिबेला वेश्यालय अस्तित्वमा थियो भन्न सकिन्छ । मैले रामायण र महाभारतका अमुक घटनालाई नभई त्यहाँ वर्णन गरिएका सामाजिक परिवेशलाई प्रमाण मान्ने गरेको छु । पुष्पक विमानको वर्णनकै आधारमा रामायणकालमा विमान थियो मैले भनेको छैन । गणेशको शरीरमा हात्तीको टाउको जोडिदिने शिवलाई मैले अंग प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो शल्यचिकित्सक पनि मानेको छैन ।
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ १०:०८